SARMS 101 - SAR को लागि तपाइँको परम मार्गनिर्देशन
SARMs १०१: तपाईको परम SARMs गाइड
हाम्रो वेबसाइटको प्रयोग गरेर र हाम्रा उत्पादनहरूलाई क्रमबद्ध गरेर तपाईं निम्न सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ
तपाईं १ 18 बर्ष भन्दा माथिको हुनुपर्दछ
कुनै पनि परिस्थितिमा हाम्रा उत्पादनहरू युकेमा कुनै पनि मानव परीक्षणहरूमा होम अफिस वा MHRA प्राधिकरण बिना प्रयोग गरिनु हुँदैन। तिनीहरू अन्वेषणात्मक औषधी उत्पादनहरू छैनन्।
हाम्रो SARMS उत्पादनहरू अनुसन्धान उद्देश्यहरूको लागि मात्र कडा बेचिन्छ।
सबै उत्पादनहरू विज्ञापन गरिएको, बेचेको वा अन्यथा यस वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ प्रयोगशाला रसायन अनुसंधान
हामीले SARMS को बारे जान्नु पर्ने सबै चीजहरू हामी संकलन गरेका छौं। यस SARMs गाईडमा, तपाईंले SARMs के हो बुझ्नुहुनेछ, SARMs को वैधानिकता र सुरक्षा, यदि SARM का साइड इफेक्टहरू छन् भने। हामी शुरुवात गर्नेहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो SARMs, कभर गर्नको लागि उत्तम SARMs, कहाँ SARM खरीद गर्ने, र अधिक कभर गर्दछौं।
पूर्ण SARMs गाईडका लागि पढ्नुहोस्।
SARMs के हुन्?
छनौट एन्ड्रोजेन रिसेप्टर मोडुलरहरू, वा SARMs, उपचारात्मक यौगिकको एक प्रकार हो। SARMs को उस्तै प्रकारको प्रभावहरू रिपोर्ट गरिएको छ androgenic औषधि (जस्तै स्टेरोइड)। जे होस्, तिनीहरू आफ्नो कार्यमा धेरै अधिक छनौट भएको मानिन्छ। उनीहरूको 'छनौट' ठ्याक्कै किन उनीहरूलाई सहयोगी, प्रयोग गर्न सुरक्षित र लोकप्रियतामा बढेको मानिन्छ।
SARMs सुरुमा मोटोपना, हड्डी, र मांसपेशी बर्बाद बढाइ र रोग (जस्तै क्यान्सर रूपमा) को कारणले गर्दा मांसपेशी बर्बाद जस्ता अवस्था उपचार गर्न सहयोग गर्न विकसित गरिएको थियो। तर हालसालै SARM हरू एथलीटहरू र शरीर सौष्ठव समुदायले अँगालेका छन्। तिनीहरू स्टेरोइडहरू भन्दा प्रयोगको लागि सुरक्षित ठानिन्छन र कुनै साइड साइड इफेक्टको धेरै थोरै उत्पादन भएको रिपोर्ट गरिएको छ।
SARMs र Peptides बीच के भिन्नता छ?
SARM र पेप्टाइड्स बीचको भिन्नता बुझ्नको लागि, पहिले पेप्टाइडहरू के हुन् बुझ्नु आवश्यक छ।
पेप्टाइडहरू के हुन्?
पेप्टाइड्स एक खास प्रकारको शरीर सौष्ठव पूरक हो जुन 50० भन्दा कम एमिनो एसिड समावेश गर्दछ। पेप्टाइड्सले स्टेरोइडहरू भन्दा कम कम साइड इफेक्टहरू पनि उत्पादन गर्दछ (SARMs समान) र कुनै सीधा अनाबोलिक प्रभाव हुँदैन। ती विकास हार्मोनको स्राव बढाउन प्रयोग गरिन्छ।
SARM र पेप्टाइडहरू बीच समानता
SARMs र पेप्टाइड्स दुबै स्टेरोइड भन्दा कम साइड इफेक्टको रूपमा परिचित छन्
दुबै कानूनी छन् केहि शर्तहरूमा किन्न
दुबै मांसपेशी निर्माण एजेन्टका प्रकारहरू हुन्
प्रत्येक मांसपेशिहरु र हड्डीहरु मा एक अप्रत्यक्ष anabolic प्रभाव छ
SARMs र पेप्टाइड्स बीच भिन्नता
SARMs कृत्रिम हुन्, जबकि पेप्टाइड्स या त प्राकृतिक वा सिंथेटिक हुन सक्छ
SARM हरू एक प्रकारको एन्ड्रोजेन लिगान्ड-रिसेप्टर हो जबकि पॉलीपेप्टाइड्स चेन एमिनो एसिडसँग 50० भन्दा कम
SARMs आफ्नो विकास वृद्धि गर्न मांसपेशी र हड्डीमा एन्ड्रोजन रिसेप्टरमा बाँधिन्छ जबकि पेप्टाइड्सले विकास हार्मोनको रिलीज बढाउँदछ
SARMs हड्डी र मांसपेशि निर्माण मा एक अत्यधिक चयनात्मक प्रभाव उत्पादन गर्दछ जबकि पेप्टाइड्स को चयनात्मकता अपेक्षाकृत कम छ
के SARMs सुरक्षित छन्?
सावधानीका साथ अगाडि बढ्न SARM को प्रयोग गर्ने बारेमा विचार गर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ। SARMs उद्योग हाल विनियमित छैन, त्यसकारण त्यहाँ धेरै कम-गुणवत्ता (र नक्कली पनि) उत्पादनहरू त्यहाँ बजारमा छन्।
त्यहाँ SARM को एक विस्तृत विविधता उपलब्ध छ, र केहि अरूहरु लाई भन्दा सुरक्षित मानिन्छ। समय को लागी, वैज्ञानिक अध्ययन र व्यक्तिगत खाताहरूले तिनीहरूलाई एनाबोलिक स्टेरोइडहरू भन्दा सुरक्षित हुन जोड दिएका छन्।
सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई वैध विक्रेताबाट SARM खरीद गर्दै हुनुहुन्छ जुन तेस्रो-पार्टी प्रमाणिकरण छ, ताकि तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ वास्तविक SARM खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो स high्ग्रह उच्च-गुणवत्ताको छ र ब्रिटेनमा फार्मास्यूटिकल-ग्रेड सामग्रीको साथ निर्मित छ। तिमी सक्छौ हाम्रो संग्रह यहाँ अन्वेषण गर्नुहोस्.
SARMs कानूनी हो?
बेलायतमा SARMs को बिक्री कानूनी छ। जहाँसम्म, SARMs बेच्ने तरिका निर्माता, विक्रेता, र खरीदकर्ताको आशयको आधारमा प्रतिबन्धित छ।
SARMs कसरी काम गर्दछ?
SARMs एनाबोलिक स्टेरोइडसँग समान रूपमा काम गर्दछ, किन त्यसैले तिनीहरू स्टेरोइडको विकल्प मानिन्छ, कम एन्ड्रोजेनिक गुणहरूको साथ।
SARMs ले मांसपेशिहरु र हड्डीको कोशिका मा विशेष गरी एन्ड्रोजन रिसेप्टर्स उत्तेजित गर्दछ growth विकासको गति बढाउने क्रममा शरीरमा अन्य कोषहरुमा न्यूनतम प्रभाव पार्दै (स्टेरोइड विपरीत)। तिनीहरूले केवल केही मांसपेशी र हड्डीको ऊतकहरू मात्र "छान्छन्" जसले कलेजो, प्रोस्टेट, र मस्तिष्कलाई छुन्छन्।
SARMs कत्तिको प्रभावकारी छ? तिनीहरू काम गर्छन्?
SARMs हल्का को रूपमा परिचित छन्, तर धेरै धेरै प्रभावी। सही परिणामहरू लिइएको SARM को प्रकारमा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, Ostarine एक लिन को लागी सबै भन्दा राम्रो SARMs को रूप मा मानिन्छ।
SARM को प्रभावकारिता पनि फिटनेस लक्ष्यहरूमा निर्भर गर्दछ। यदि लक्ष्यहरू बोसो जलाउन र मांसपेशिहरू निर्माण गर्ने हो भने, ओस्टारिन जस्ता एक SARM प्रयोगकर्ताहरूलाई जम्मा १२ हप्तामा to देखि १० पाउन्डसम्म कहिँ पनि प्राप्त गर्न मद्दत गर्न प्रभावी छ।
के SARMs का साइड इफेक्टहरू छन्?
SARMs को रिपोर्ट गरिएको साइड इफेक्टहरू को लागी धेरै कम छ। धेरै SARMs, Ostarine समावेश, गैर-मथिलेटेड छ त्यसैले यसले कलेजोलाई असर गर्दैन।
रिपोर्ट गरिएका केही साइड इफेक्टहरू थकान र सुस्तताका रूपमा छन्, यद्यपि यो भनिन्छ कि सिफारिस गरिएको खुराक अन्तर्गत यी साइड इफेक्टको अनुभव गर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ।
सत्य यो हो किनभने SARMs तुलनात्मक रूपमा नयाँ छन्, अनुसन्धानले अझै SARMs को प्रयोगको दीर्घकालीन प्रभावहरू देखाउन सकेको छैन, यद्यपि तिनीहरू प्रारम्भमा एनाबोलिक स्टेरोइडको लागि हल्का विकल्प प्रदान गर्न सिर्जना गरिएको थियो।
चाहे प्रयोगकर्ताले साइड इफेक्टको अनुभव पनि SARM को शक्तिमा निर्भर गर्दछ, उदाहरणको लागि, एक मजबूत SARM साइड इफेक्टको उच्च जोखिम हुन सक्छ। केही पुन: परिवर्तन योग्य साइड इफेक्टहरू:
शुक्राणु गणना र टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा कटौती
तेल छाला र कपाल
कोलेस्ट्रॉलको स्तरमा परिवर्तन गर्नुहोस्
कामेच्छा मा परिवर्तन गर्नुहोस्
केहि रिपोर्टहरू अपूरणीय साइड इफेक्टहरू SARM को उच्च डोजहरूमा लिइएको समावेश गर्दछ:
बढेको क्यान्सर जोखिम (चयन SARM हरूको साथ)
के SARMs यसको लायक छ?
SARMs लायक छ वा छैन यो प्रयोगकर्ताको विशेष केसमा निर्भर गर्दछ। केहि SARM हरू फ्याट काट्नका लागि उत्तम हुन्छन्, अरूहरू बल्क अपका लागि उत्तम हुन्छन्। केहीको लागि, SARM हरू मांसपेशिको खेर फाल्न रोक्नको लागि र समग्र कंकाल स्वास्थ्य सुधार गर्न धेरै उपयोगी छ। यो सबै SARMs को उपयोगको लागि अन्तिम लक्ष्यमा निर्भर गर्दछ।
मैले कुन SARM लिनु पर्छ?
SARM को प्रकार जुन तपाइँ लिनुहुन्छ साथै स्ट्याक तपाइँले लिनुहुन्छ (यदि कुनै छ भने) धेरै हदसम्म कुनै व्यक्तिको शरीरले SARM र उनीहरूको फिटनेस लक्ष्यहरूमा कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ त्यसमा निर्भर गर्दछ। तलका विभिन्न उद्देश्यहरूका लागि SARM को उत्तम प्रकारहरू छन्।
शुरुआतीहरूका लागि सर्वश्रेष्ठ SARMs
निम्नलिखित शुरुवातकर्ताहरूका लागि मनपर्दो SARM हरू र कम डोज खोज्ने महिलाहरूले पनि छन्।
तपाईं यी 'शुरुआत' को संयोजनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्ट्याकहरूमा SARMs.
काटनेको लागि उत्तम SARMs
SARM का धेरै प्रयोगकर्ताहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू काटिउनको लागि विशेष सहयोगी छन् किनकि त्यसले शरीरलाई पानी प्रतिधारण बढाउनु बिना पातलो मांसपेशीहरू कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यहाँ काटनेको लागि उत्तम SARM छन्:
बल्किंगका लागि उत्तम SARMs
यहाँ केहि राम्रा SARM हरू दिईएको छ र मांसपेशि लाभ को लागी:
त्यहाँ छनौट गर्न धेरै प्रकारका SARM स्ट्याक्स छन्। यहाँ केहि उत्कृष्ट छन्:
शुरुआत काट्ने स्ट्याक
शुरुआत मांसपेशी स्ट्याक
मध्यवर्ती कटिंग स्ट्याक
मध्यवर्ती मांसपेशी स्ट्याक
उन्नत कटाई स्ट्याक
उन्नत मांसपेशी स्ट्याक
SARMs मा तपाईंको खाना
SARMs स्ट्याकको साथ तपाईले अनुभव गर्ने नतिजाहरु धेरै बढि हुन्छ जब सही डाइटको साथ जोडा मिलाइन्छ। SARMs लिने एक्लो ले तपाईंले खोजिरहनु भएको शरीर प्रदान गर्दैन यदि तपाईंले सही खानेकुरा खान वा व्यायाम गरिरहनु भएको छैन भने।
SARM को साथ कुञ्जी तपाईंको आहारमा प्रोटीन बढाउनु हो। SARMs ले तपाईंको शरीरलाई अधिक anabolic राज्यमा राख्दछ, त्यसैले, तपाईंको शरीर प्रोटीन संश्लेषण वृद्धि गर्न सक्षम हुनेछ। सामान्य सिफारिश भनेको तपाइँको नियमित प्रोटीन पाउडर सेवन डबल गर्नु हो।
SARMs को एन्टि-इस्ट्रोजेन प्रभाव हुन्छ। यसको मुकाबिलाका लागि तपाईको खानामा बढि सागपात थप्न आवाश्यक छ, विशेष गरी ती जसले मशरूम जस्ता एन्ट्रो-एस्ट्रोजेन प्रभावहरूसँग लड्दछन्। त्यहाँ खानेकुराका सामग्री र प्रकारहरू तपाईले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुपर्दछ, जस्तै:
धेरै नै नाइट्रेटको साथ मासु ठीक गरियो
भुटेको / कुटेको खाना
कृत्रिम सामग्री र हाइड्रोजनेटेड तेलहरूको साथ प्रशोधित खाद्य पदार्थ
महिलाको लागि SARMs
महिला पुरुषहरु जस्तै समान कारणहरुका लागि SARM लिन चाहन्छन्: शक्ति र सहनशक्ति बढाउन, फ्याट जलाउन, र दुबला मांसपेशि प्राप्त गर्न। SARMs ले महिलालाई समग्र उर्जामा राम्रो बृद्धि प्रदान गर्दछ।
महिलाहरूले एसएआरएमहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्, तथापि, यो सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ कि महिलाहरू पुरुषहरू भन्दा साइड इफेक्टले बढी प्रभावित हुन्छन्। एक्ने, बढी कपालको बृद्धि, कामवासना परिवर्तन, मुड स्वि sw्ग, र आवाज गहिरो रूपमा केहि चीजहरू महिलाहरूले अनुभव गर्न सक्दछन्, त्यसैले सावधानीपूर्वक छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जुन SARM ले लिने र अनुभवी साइड इफेक्टहरूको अनुगमन गर्न। यो पनि आवश्यक छ कि महिलाहरु एक पटक SARMs चक्र को माध्यम मा गए पछि पोस्ट चक्र थेरापी गर्न।
SARM लिने महिलाहरूले पनि परिणामहरू अधिक चाँडो देख्न सक्छन्। सुधार १-२ हप्ता सम्ममा हुन थाल्छ। यहाँ महिलाहरूका लागि सिफारिस गरिएको SARM का प्रकारहरू छन्:
SARMs महिलाहरूको लागि खुराक
महिलाहरूले आफ्नो पुरुष समकक्षहरूको तुलनामा थोरै खुराक लिनु पर्छ। सटीक खुराक SARM कुन लिइएको हो त्यसमा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, Ostarine संग, पुरुष दिनको २० मिलीग्राम को साथ शुरू गर्नु पर्छ र सम्भवतः mg० मिलीग्राम सम्म आफ्नो बाटोमा काम गर्नुपर्दछ। यद्यपि महिलाका लागि डोज हरेक १० दिनमा मात्र १० मिग्रि हुनु पर्दछ र परिणाममा निर्भर गर्दै त्यहाँबाट बढ्नुपर्दछ।
मात्र याद गर्नुहोस् जब यो SARMs को लागी आउँछ, प्रभाव र खुराक हरेक व्यक्तिको लागि फरक हुन्छ, र महिला मात्र होइन। सानो डोसको साथ सुरू गर्न, परिणामहरूको लागि हेर्नु, र त्यहाँबाट समायोजन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
SARMs एक राम्रो विकल्प हो महिलाहरु लाई आशा छ उनीहरूको शक्ति र मांसपेशि बढाउन को लागी ती प्रभावहरु छिटो महसुस गर्न को लागी। वैकल्पिक प्रोमोर्मोन र स्टेरोइड शरीरमा कठोर हुन सक्छ र महिलामा साइड इफेक्टको पनि उच्च स्तरको परिणाम दिन्छ। SARMs ले महिलाहरूलाई धेरै मांसपेशी बिना आफ्नो मांसपेशी टोन गर्न विकल्प दिन्छ। तिनीहरू एक फरक फरक पार्छन् शरीरमा प्रभाव पार्न को लागी जबकि हल्का पनि। साथै, महिलाहरूले एनाबोलिक स्टेरोइडको कठोर नकारात्मक साइड इफेक्टसँग डिल गर्नु पर्दैन।
SARMs लिइसके पछि पोस्ट साइकल थेरापी
पोस्ट-साइकल थेरपी (PCT) एक SARMs को एक चक्र पूरा गर्ने ठीक छोटो अवधि हो जहाँ प्रयोगकर्ताले उनीहरूको हार्मोनको स्तर सामान्य स्तरमा ड्रग्स, डाइट, र अन्य यौगिकहरूको संयोजन मार्फत प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ। शरीरलाई सजीव पार्ने उपायको रूपमा पोष्ट-चक्र चिकित्साको बारेमा सोच्नुहोस्।
त्यहाँ एक साइज-फिट-सबै पोस्ट-चक्र थेरापी कोर्स छैन। व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ, SARM लिईएको प्रकार, र SARM चक्र समयको लम्बाइ, PCT कोर्स विभिन्न चीजहरूको लागि निर्धारित गर्न सकिन्छ। यो सबै रोग मा निर्भर गर्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो पीसीटी अग्रिम योजना बनाउनुपर्दछ, सामान्यतया SARMs चक्रको अन्त्य तिर सामान्य हर्मोन स्राव स्थिर हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न।
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनभने SARMs का कुनै साइड साइड इफेक्ट छैन र त्यहाँ धेरै थोरै स्थिर प्रभाव छ कि चक्रपश्चात थेरापी त्यति आवश्यक छैन जस्तो कि यो अधिक पारम्परिक anabolic स्टेरोइडको साथ हुनेछ।
केहि कम-शक्तिशाली SARM को छोटो अन्तरालहरूमा लिएको छ, जस्तै Andarine, सबै मा पोस्ट चक्र चिकित्सा आवश्यक पर्दैन, जबकि एक धेरै शक्तिशाली महीनको SARM धेरै महिनाको अवधिमा लिइएको लगभग प्रायः पोस्ट-चक्र उपचार आवश्यक पर्दछ।
कहाँ SARM खरीद गर्ने? यहाँ SARMs Store UK मा अवश्य छ
बजारमा कुनै चीज जस्तै, यो संदिग्ध स्रोतहरूबाट आउने उच्च-गुणवत्ता SARMs र कम-गुणवत्ता SARMs बीच डिसिफर गर्न महत्त्वपूर्ण छ। विशेष रूपमा, यदि प्रस्तुत SARM बजारमा फेला परेका अन्य उत्पादनहरू भन्दा धेरै सस्तो छ भने यो सम्भवतः उच्च उत्पादन र उत्पादन मापदण्डमा समाहित हुनेछैन। यहाँ SARM का साथ समस्याहरूको केहि प्रकारहरू छन् जुन गुणस्तरले उत्पादन गर्दैन र तेस्रो-पार्टी प्रमाणित छैन:
विष र हानिकारक रसायनहरू SARM मा थप्दै
SARMs अस्वस्थ पदार्थको साथ पातलो गर्दै
अधिक नाफाको लागि गलत हिसाबले
लागतमा बचत गर्न उत्पादनको समयमा कुनाहरू काट्ने
यो जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि एक SARMs उत्पाद तेस्रो पार्टी प्रमाणित गरिएको छ कि भनेर जान्नका लागि कि यो एक गुणवत्ता उत्पादन हो।
SARMs Store UK मा, हामी उच्च गुणवत्ताको SARMs र पूरकहरू बिक्री गर्छौं जुन सुरक्षित, कानुनी छ, र परिणामहरू उत्पादन गर्दछ। हाम्रो SARM हरू बेलायतमा उच्च गुणस्तरीय मापदण्ड र फार्मास्यूटिकल ग्रेड अवयवहरू प्रयोग गरी निर्मित छन्। यसको मतलब प्रयोगकर्ताहरूले सुरक्षित रूपमा दुबै मांसपेशीहरू बढाउनको लागि SARM प्रयोग गर्न सक्दछन् र बोसो गुमाउन सक्छन्।